Iingubo zabasetyhini | Imfashini | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Iingubo zabasetyhini | fashion
Kutheni iinqwelo ezithengiweyo zivame ukugqithwa?
Izibhathathi zinamathele - kunye nokwanda
Izicathulo zaseItali zinesiko elide
Yintoni eyenza izicathulo zaseNtaliyane zihluke kwabanye?
Izicathulo zabasetyhini ngokukhangela
Uninzi lwabafazi banamaqhina amaninzi kunamadoda, kodwa kutheni bahlala kwikhefu ixesha elide bengagqwali? Ngokomzekelo, uphando lwe-intanethi lufumene ukuba amabhinqa anesibini ngokuphindwe kabini kwezihlangu ezifana namadoda.
Abasetyhini neenqwelwe - Enye yeepuzzle ezinkulu zendalo yonke
Kwiikhabhinethi zeembadada zamabhinqa zikho, ngokutsho kophando lwe-17 zihlangu, amadoda aphela malunga ne-8. Kodwa kutheni oko? Ngaba kutheni abafazi bathanda ukuthenga? Ngokuqinisekileyo le ngenye yezizathu zohlukwano olukhulu, kodwa ngokweengcali zeengqondo kukho imbambano eyahlukileyo.
Kutheni abaninzi abafazi bembatha isihlangu?
Akukhona nje kuphela ukuba isiqalo sezicathulo zabasetyhini siyabonakala kwiseshoni, kodwa kunye nokuba izihlangu ezininzi azigqaliyo. Abasetyhini bathanda ukuthenga, kwaye xa befuna ukutshintsha okanye baneengxaki, ijeyari zokuqala zihlala kwindawo yokuthengisa.
Inyaniso yokuba bahlala bethenga izicathulo kodwa abazigqokiyo kunzima ukuba umntu aqonde. Ngenxa yokuba ezi zihlazo zithengisa kwaye zivumele iimvakalelo zabo kunye nemvakalelo kwezinye iimeko, umzekelo, ngexesha lezemidlalo okanye ibhotile yobhiya ngelixa libukela ibhola ngemidlalo.
Ngokuthenga izicathulo ezintsha, banokuvakalisa amaphupha abo kunye neemvakalelo zabo. Oku kufana nokutshintshwa kwekhanda, edlalwa rhoqo ngabafazi ukuba bafuna ukutshintsha.
Kodwa kutheni a baninzi abafazi bembatha izihlangu zabo? Ngokutsho kwengcali yezengqondo, injongo yezicathulo ayikuzimbathisa, kodwa ukuba zibe nazo kwaye zizenzele xa zibuhlungu. Ukuva nje ukuba uvakalelo lweshangu entsha kubaluleke kakhulu kubafazi.
Ukongezelela, isizathu sokuthenga izihlangu ezintsha, ukulandela umkhondo wamanje. Kungenzeka ukuba udumile kwiTV ewembethe isicathulo esivela kwiqoqo elitsha lomqambi owaziwayo kwaye umfazi wakho ufuna ukuba kanye nale nto. Nanku, amadoda namabhinqa ahluke, kuba amadoda akhathalele ukuba ngubani onxibe kwiTV kunye nokuba iqoqo elitsha lifikile kwimarike.
Esinye isizathu sokubhinca ibhondi yowesifazane kukuzivuza. Ngokomzekelo, ukuba intsipho ebalulekileyo iyanqotshwa, njengokupasa ngokuphumelelayo uvavanyo okanye ukuphumelela.
Omnye unokuzibuza ukuba kutheni nje izicathulo abafazi abathenge xa ​​befuna utshintsho. Oku kunzima ukuchaza, kuba izicathulo zihlala zifanelekile, nokuba isisindo sinyukile.
Iingubo, iingubo okanye izikhwepha, ngakolunye uhlangothi, zinokuba nzima, nto leyo ingakhokelela ekudakaleni. Ukongezelela, akukho ziindawo ezinengxaki ezinkwantya kwiinyawo. Yaye ukuba indawo ayiyinto enhle, izicathulo ezivaliweyo zingathengwa.
Kutheni iipompo kunye nezithende eziphakamileyo zithandwa kangaka?
Ukongezelela kwezinye izicathulo ezahlukeneyo, iipompo kunye nezithende eziphakamileyo zithandwa kakhulu ngabasetyhini. Benza imilenze ibonakale imide kwaye ilula, into ebaluleke kakhulu kwabasetyhini. Ngoko ke ukuqonda okuncinci kukuza, kufana neendlela iinkwenkwezi kwi-tappet ebomvu, ukuba ngaba kunjalo kule ndawo.
I-Italy yenye yeentlanga ezineembali ende ekuveliseni izihlangu. Ngenyameko enkulu, izicathulo zaseItali ziyaveliswa ngesandla. Ekuqaleni, kwakungamabini abambalwa abenziweyo abaveliswa ngabaculi abancinci baseTaliyane.
Izicathulo zaseItali zibonakaliswa ngobuhle
Namhlanje, zenziwe ngumatshini ngezizathu zeendleko, kodwa ke le pallets zisenziwa kunye noluthando oluqhelekileyo lwamaTaliyane kunye nokunakekelwa kwezicathulo. Umthengi uvela kuzo zonke iingqungquthela zehlabathi. Ukuba awufuni ukuthenga izicathulo ngqo kwi-Italia, unokuthi ulandelele kwi-intanethi okanye uzame iibhotshi zase-Italy eziphakamileyo, izicathulo, i-slippers njl. Kwivenkile ekhethekileyo yasekuhlaleni.
Izicathulo zaseItali zisoloko zinezinga eliphezulu kakhulu. Ziye zenziwa ngokugqibeleleyo. Iikhumba ezikhethiweyo ziqinisekisa kwakhona ixesha elide lokuphila. Iimodeli ezimnandi ezingapheliyo zigqibeleleyo zoshishino okanye ebusuku. Ukongeza kwiingwele zikwahluke kakhulu kwiimpahla ezivela eItali, ebizwa ngokuba yilizwe elivela kwimfashini. Ngako oko, ingakumbi izambatho kunye nezicathulo zamatshini aziwayo, ezifana noGucci okanye Prada zithandwa kakhulu. Kodwa kunye nezibini zikaSalvatore Ferragamo kunye noBruno Magli zenza iintliziyo zibethe ikakhulukazi abafazi.
Imfashini yaseNtaliyane inokuthi ichazwe ngamagama ambalwa: umgangatho ophezulu, ubuhle, obuhle. Abathengi kwihlabathi lonke bathembele kwi "Made in Italy" izihlangu. Kwixesha elidlulileyo, ezi zihlangu zazingumqondiso wobume benene, namhlanje abathengi bajonge phambili ekusebenzeni kakuhle. Emva kokuba bebehloniphekile abazalwana abonakalisa ubutyebi babo kunye nodumo kunye nezicathulo zaseItaliyane. Nangona kunjalo, iimodeli zenziwe yesikhumba esilungileyo okanye sebhokhwe, esicatshulwa kakhulu, engenakukhathazeka nokuphefumula.
Amadoda kunye nabasetyhini badibanisa ne-Italia kodwa banomdla, ubunqweno kunye nomtsalane. Ingaba abathengi bakhetha i-sneakers sporty, i-ballerinas ephathekayo, izithende eziphakamileyo okanye izithende eziphezulu ze-sexy, zonke zibonisa umlingisi oqhelekileyo wase-Italy. Izwe alizange liyeke ukuphuhlisa ixesha elide. Iinkqubo zokuveliswa kwezobugcisa zikarhulumente ziqinisekisa ukuba izicathulo zingaveliswa ngokwezifiso ezinyaweni zabathengi. Njengokuzilibazisa kunye neshishini lomsebenzi, iimpawu ezivela e-Italy zilungile njengamaqela asemoyeni.
Iigrafti zeenyawo | Iifashthi zebhola
Amaphepha enemibala e-Erotic kubantu abadala - abafazi
Umbala obalaseleyo womfanekiso wabesifazane abhedi
Umbala obalaseleyo womfanekiso wesibini abasetyhini abasondelene nabo
Uhlobo lwebhinqa lombala
Umbala obalaseleyo womfanekiso wesifazane othandweni
Umbala wokubala Ithenda yabesifazane
Izibopho - Iifashoni zeNkosi
Umbala wefayili wengubo yebhola yebhola
Umbala wefayili ukhetha ibhayisiki